တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက ဝဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်သည်အလွန်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်က web-based အီးမေးလ်ကိုသုံးသောလူသန်းပေါင်းများစွာထက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိုလျှင် desktop desktop email client သို့ပြောင်းလိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ကျွန်တော်တို့အများစုသည်ယခုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရသည် ရာနှင့်ချီသောမက်ဆေ့ခ်ျများ တစ်ရက်၏သင်တန်း၌တည်၏။ ၀ က်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုပေါ်တွင်သတင်းစကားတစ်ခုနှင့်သင်ကိုင်တွယ်သည့်အခါတိုင်း၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ဝေးလံသောဝေးလံသော ၀ က်ဘ်ဆာဗာအချို့ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ Hotmail သည် message များကိုဖျက်ရန်အလွန်လွယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း Outlook, Thunderbird သို့မဟုတ် Mail.App တို့ကဲ့သို့မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တစ်စက္ကန့်ဝက်လျှင်တစ်စက္ကန့်လျှင်တစ်မိနစ်အလိုအရကြီးမားပုံမရပေ။ သို့သော်သင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကလစ်များနှင့်ဆက်ဆံပါကသင်သည်မိနစ်ပေါင်းများစွာဖြုန်းတီးနေသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဝက်ဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ဂလိုင်း၏အမြန်နှုန်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မူမတည်ဘဲသင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူစည်ကားသော wifi ဟော့စပေါ့ကိုဖွင့်ပြီး Gmail တောင်မှတွန့်လိမ်သွားသည်။
Web-based အီးမေးလ်နှင့် desktop-based အီးမေးလ်အကြားအဓိကခြားနားချက်မှာ ဝင်ရောက်ခွင့်ခြေလှမ်းများ၏ sequence ကို။ အကယ်၍ သင်သည် Yahoo မှသတင်းစကားတစ်ခုတွင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုပူးတွဲပါက! စာ, သင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအမှန်တကယ်မပို့နိုင်မီ upload တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည် web-based အီးမေးလ်၏သဘောသဘာဝသာဖြစ်သည်။ သင့်အရာသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အမှန်တကယ်ကူးပြောင်းခြင်းမရောက်မှီအထိအပလီကေးရှင်းသည်ဝဘ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော်သင်၏ desktop အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်ရှိမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုသို့ဖိုင်တစ်ခုကိုပူးတွဲပါ၊ ဤဖိုင်သည် 1k (သို့) 10MB ဟုတ်မဟုတ်အရေးမကြီးပါ။ သငျသညျ snappy connection သို့မဟုတ်နာကျင်စွာနှေးကွေးသောတဆက်သွယ်မှုကိုပေါ်တွင်လျှင်ရှိမရှိအရေးမထားဘူး။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်အီးမေးလ်များရေးသားရန်၊ ပူးတွဲဖိုင်များထည့်ရန်နှင့်ပေးပို့ရန်အတွက်တန်းစီရန်အွန်လိုင်းတွင်ပင်မရှိတော့ပါ! သင်၏ desktop အီးမေးလ်သည်ရိုးရာစာတိုက်မေးလ်များနှင့်အတိအကျအလုပ်လုပ်သည်။ မေးလ်ပို့သူနှင့်သင်နီးကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချိန်နှင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာတိုင်းတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
စောင့်ပါ။ ပူးတွဲဖိုင်များကိုဆွဲချချပါ။ ကြည့်ကြရအောင်၊ ဒါက desktop အီးမေးလ်ဖောက်သည်တွေအတွက်ပါ အနည်းဆုံး 1997 ကတည်းက။ ပြီးတော့ဂူးဂဲလ်အကြောင်းပြောရရင်သူတို့ဟာ“ အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှု” အတွက်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောဝဘ်အခြေပြုအီးမေးလ်ဂလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်နှစ်နီးပါးနီးပါး။။ ၎င်းသည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ခန့်ကတည်းက desktop အခြေပြုမေးလ်သုံးစွဲသူတိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းပါသည်၊ web-based အီးမေးလ်ပရိသတ်များ။ သငျသညျအင်္ဂါရပ်များပြိုင်ပွဲအနိုင်ရမဟုတ်ပါဘူး။
ငါ့ကို paranoid လို့ခေါ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာအီးမေးလ်အားလုံးကိုအခမဲ့ပေးသူမှတစ်ဆင့်တိမ်တိုက်ထဲ၌နေရန်ယုံကြည်ရန်စိတ်ကူးကိုမကြိုက်ဘူး။ တစ်ချိန်ကခဏ၌တည်၏ သဘာဝဘေးဒဏ် desktop-email client တစ်ခုဖြင့်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျအားလုံး၏အနည်းဆုံးကော်ပီနှစ်ခုအလိုအလျောက်ရရှိလိမ့်မည်။ မိတ္တူတစ်စောင်ကိုအွန်လိုင်းတွင်သိမ်းဆည်းပြီးနောက်တစ်ခုသည်သင်၏ desktop သုံးစွဲသူနှင့်ထပ်တူပြုသည်။ သင့်တွင်ကွန်ပျူတာများစွာရှိပါက (အများစုကိုကျွန်ုပ်စိတ်ကူးပါသည်) Martech Zone စာဖတ်သူများလုပ်) သင်အလိုအလြောကျမိတ္တူအများအပြားရှိသည်။
သင်၏ desktop အီးမေးလ် client ကိုစနစ်တကျ configure လုပ်ပါကဤအရာသည်ပြanနာမဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အခြေပြုပံ့ပိုးသူမှတစ်ဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းပို့နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်လုံးဝအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုသင်ရနိုင်သည်။
... ဘာကြောင့်လူတိုင်းကမသုံးတာလဲ ကျနော့်သီအိုရီကအဲဒါဟာနည်းနည်းလေးအားစိုက်ထုတ်တာပဲ။ နှစ် ဦး စလုံးသော်လည်း ဇimbra နှင့် Thunderbird ကို နှင့် Windows Live Mail ကို လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ set up လုပ်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။ သင်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော web-based client နှင့်ရင်းနှီးပြီးသားဆိုရင်သင်ဟာပြောင်းလဲမှုနည်းလိမ့်မယ်။